२७ मङ्सिर २०७५ | December 13, 2018
​विश्वका चर्चित १० अनसन : एकसाथ २९ हजार व्यक्ति बसेकोदेखि १६ वर्षसम्म नखाएको रेकर्ड !
Saturday, 13 Jan, 2018 3:06 PM
नेपालमा खास चर्चा अनसनकै छ । जब डा. गोबिन्द केसी अनसन बस्छन्, तब देशका राजनीतिक दलमात्रै होइन जनता नै समर्थन र बिरोधमा बाँडिन्छन् । यसपटक त केसीको अनसनले सर्वोच्च अदालतसम्म हलचल ल्याइदियो । जे होस् डा. केसीले सरकारसँग पाँच बूँदे सहमतिमा १४औं अनसन तोडेका छन्, तर आफ्नो माग पूरा नभए अनसन सुरु गर्ने चेतावनीसहित । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा उनको अहिलेको प्रमुख माग छ । नेपालमा केसी धेरै पटक आमरण अनसन बस्ने व्यक्तिमा पर्छन् । तर, लामो समयसम्म निरन्तर अनसन बस्ने व्यक्ति भने गंगामाया अधिकारी हुन् । उनी वीर अस्पतालमा अहिले पनि निरन्तर अनसनमै छिन् । उनका श्रीमान् नन्द्रप्रसाद अधिकारीको अनसन सुरु गरेको ३ सय २९ दिनमा ६ असोज ०७१ मा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पनि गंगामाया अनसनमै रहिन् । तर, तत्कालीन सरकारले दिएका कतिपय बाचा स्विकार्दै २ कात्तिक ०७१ मा उनले ३ सय ५८ दिन लामो अनसन तोडिन् । यद्यपि उनका माग पूरा भएनन् । केही समयपछि उनले फेरि सुरु गरेको अनसन अहिलेसम्म निरन्तर जारी छ । नेपालमा बिभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा छिटफुट आमरण अनसन त भएकै छन् जुन खासै चर्चा गर्ने खालका भने छैनन् । नेपालमा अधिकारी दम्पत्ति नन्दप्रसाद र गंगामाया तथा डा. केसीको अनसन बढी चर्चामा छ । तर, विश्वमा चाहिँ कस्ता–कस्ता आमरण अनसन भए होलान् ? यस्ता छन् विश्वका चर्चित १० आमरण अनसन :
–१६ वर्षसम्म आमरण अनसन बसेकी भारतीय नागरिक इरोम शर्मिला
सेजर चावेज ‘फास्ट फर लाइफ’
सन् १९२७ मा अमेरिकाको गरिब परिवारमा जन्मेका सेजर चावेज म्याक्सिकन मुलका प्रवासी हुन् । उनको परिवार एउटा ग्यारेज, पुल र किराना पसल चलाउँथ्यो । तर, यो परिवारल धोकाधाडीमा आफ्नो खेत गुमायो । अनि, चावेजले ७ कक्षादेखि नै आफ्नो पढाई छोड्नु पर्यो । त्यहाँका धेरै किसान परिवारले क्यालिफोर्निया र एरिजोनामा गएर प्रवासी श्रमिकको रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो । चावेजले पनि आफ्नो पढाई छोडेर श्रमिकको रुपमा खेतमा काम गरिरहेका थिए । तत्कालीन समयमा श्रमिकहरुलाई दास सरह व्यवहार गरिन्थ्यो । अति भएपछि १९६२ मा चावेजले यसको विरुद्धमा आवाज उठाए र राष्ट्रिय कुषि श्रमिक संघको स्थापना गरे । उनले गाउँ–गाउँ र शहर–शहर गएर कृषि श्रमिकको बारेमा जनचेतना फैलाउँदै श्रमिकहरुलाई आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्न आह्वान गरे ।
शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो आन्दोलन क्यालिफोर्नियाभर फैलाए । हजारौं श्रमिकसहित उनले मार्च, पिकेट्स, धर्ना र भोकहड्ताल गरे । उनको आमरण अनसन ३६ दिनसम्म चलेको थियो । फास्ट फर लाइफ नामको उक्त भोक हड्तालको मुख्य उदेश्य कृषि श्रमिकहरुको स्वास्थ्यमा आउनले खतरा र उनीहरुका बच्चालाई किटनाशकको प्रदर्शनबारे कानुन बनाउनु थियो । अन्ततः चावेजको माग पुरा भएको थियो । साथै किसानहरुलाई विमा, ज्याला र अन्य लाभहरु दिइएको थियो । सन् १९९३ मा सुतेकै अवस्थामा उनको मृत्यु भयो ।
प्यालेन्टेनी भोक हड्ताल
नागरिकमाथि अत्याचार र इजराइलका प्रमुखहरुको विरुद्धमा २ हजार व्यक्तिहरुले २०१२ मा इजराइलमा आमरण अनसन गरेका थिए । १ महिनासम्म चलेको उक्त अनसनमा मानिसहरुले ‘कि त स्वतन्त्रता पाउने छौं, कि ज्यान गमाउनेछौं’ भन्ने नारा लिएका थिए । अनसनकर्ताहरुको मुख्य माग शिक्षामा पहुँच र एक्लो कारावास तथा प्रशासनिक रोकको अन्त गर्नु थियो । एक महिनाको अथक प्रयासपछि प्यालेस्टाइनीहरुले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेका थिए । करिव ४०० कैदीहरुका परिवारले जेलमा गएर आफ्नो आफन्तलाई भेट्ने छुट पाएका थिए । योबाहेक अन्य सामान्य सुधारहरु पनि भएका थिए । यसका साथै अतिरिक्त सेवाको रुपमा टेलिफोन कल र टेलिभिजन सुरु गरिएको थियो । जन सहभागितालाई आधार मान्ने हो भने विश्व इतिहासमै ठूलोमध्येको एक भोक हड्ताल हो ।
सोल्लेन्ज फर्नेक्स ‘फास्ट फर लाइफ’
१५ जुलाई १९३४ मा स्ट्रासबर्ग, फ्रान्समा जन्मेकी सोल्लेन्ज फर्नेक्स एक समाजवादी तथा राजनीतिज्ञ थिइन् । १९७९ को युरोपेली चुनावमा उठेकी उनले मात्र ४.३९ प्रतिशत भोट पाएर ठूलो हार खेपेकी थिइन् । बिभिन्न गैर–सरकारी संस्था, किताब र प्रस्तुतीहरुमा आबद्ध भएकी सोल्लेन्ज फर्नेक्सले महिलाको हक अधिकार र आणविक उर्जाका कारण वतावरणमा पर्ने क्षतिका विषयमा आवाज उठाएकी थिइन् ।
आणविक शक्ति निष्क्रिय गर्ने उद्देश्यका साथ उनले १९८४ मा पेरिसमा ‘फास्ट फर लाइफ’ नामक आमरण अनसन गरेकी थिइन् । उक्त भोक हड्ताल ४० दिनसम्म चलेको थियो । बन विनाश रोक्नका लागि यो एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि थियो । उनले पृथ्वीमा हरियाली कायम राख्ने उद्देश्यसहित ग्रीन पार्टीको पनि स्थापना गरेकी थिइन् । उनलाई आफ्नो कदमले परिस्थितिक प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउने विश्वास थियो । उनको उक्त भोक हड्तालको सफलतास्वरुप पछि उनी ‘न्यूक्लियर फ्रिरी अवार्ड’ ले संमानित भएकी थिइन् ।
क्यालिफोर्नियाका कैदी भोक हड्ताल
८ जुलाई २०१२ मा क्यालिफोर्नियाको जेलका २९ हजार कैदीहरुले भोक हड्ताल सुरु गरेका थिए । यो विश्वको इतिहासको सामुहित भोक हड्तालमध्ये सबैभन्दा लामो समय चलेको हड्ताल हो । यो भोक हड्तालको प्रमुख कारण निर्जन कारावास थियो । ६० दिनसम्मको हड्ताल पेलिकन बे स्टेट जेलको सुरक्षा हाउसिङ यूनिटममा चलेको थियो । यो हड्ताल क्यालिफोर्नियाको भोक हड्ताल मध्यको सबैभन्दा खामो हड्ताल थियो । यो अनसनमा कैदीहरुले खानपिन मात्र नभएर जेलका अधिकारीहरुसँग अभ्यास गर्न पनि छाडेका थिए । २०१२ को सेप्टेम्बरसम्म २ वटा जेलमा १०५ जना मात्र बाँचेका थिए । अनसन बस्नेमध्ये एक सय जनाले फेरि खानपिन सुरु गरे पनि अन्य कैदीले भने डाक्टरको सहायतामा जेलका अधिकारीहरुले नाक र मुखबाट जबर्जस्ती खाना खुवाएका थिए ।
बबी स्यान्डस ‘१९८१ आइरिस भोक हड्ताल’
उत्तरी आइल्याण्डमा सन् १९८१ मा आइरिस रिपब्लिकन कैदीहरुले बेलस्टास्टको लङ केस लेजमा आइरिस भोक हड्ताल गरेका थिए । मार्गरेट थेचरको सरकारले आफूहरुलाई आम कैदी नभएर राजनीतिक कैदीको समान्न दिनुपर्ने अनसनकारीको माग थियो । ६६ दिन लामो उक्त भोक हड्तालमा १० जना कैदीहरुले ज्यान गुमाएका थिए । बबी स्यान्डस पछि बेलायतका संसद सदस्यको रुपमा समेत चुनिएका थिए ।
जितेन्द्रनाथ दास ‘स्वतन्त्र भारत आन्दोलन’
जितेन्द्रनाथ दास २७ अक्टोबर १९०४ मा भारतमा जन्मेका थिए । उनी एक मेहनति र स्वतन्त्रता कार्यकर्ता थिए । उनी सानैदेखि आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्थे । र, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तीका लागि तत्पर हुन्थे । उनी १७ बर्षको उमेरमा गान्धीको ‘असहयोग आन्दोलन’मा सहभागी भएका थिए । उनले सुरु गरेको लाहोर जेल भोक हड्ताल लामो समयसम्म चलेको थियो । उनलाई अन्य केही व्यक्तिले पनि साथ दिएका थिए । उक्त हड्तालमा उनीहरुले युरोपेली कैदी र भारतीय कैदीहरुलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तल्तकालीन समयमा भारतीयहरुलाई जेलमा अमानवीय व्यवहार गरिनुको साथै उनीहरुको स्वास्थ्यसँग पनि खेलवाड गरिन्थ्यो । जितेन्द्रले १० जुन १९२९ मा सुरु गरेको उक्त भोक हड्ताल ६३ दिनसम्म चलेको थियो । जेल कर्मचारीहरुले उनलाई खाना खुवाउने धेरै प्रयास गरेपनि असफल भएका थिए । तल्तकालीन समयमा उनको रिहाइको लागि सरकारसँग अपिल गरिएता पनि त्यति बेलाको सरकारले अस्विकार गरेको थियो । फलस्वरुप १३ सेप्टेम्बर १९२९ मा उनको अनसनकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनको शव कोलकाता लगेर अन्तिम संस्कार गरिएको थियो । उनको बलीदानको समर्थन गर्दै हजारौं मानिसहरुले श्रद्धान्जली दिएका थिए ।
भगत सिंह ‘स्वतन्त्र भारत आन्दोलन’
भगत सिंह भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाएका व्यक्ति थिए । आफ्नो जीवनका धेरै बर्ष जेलमा बिताएका सिंह एक दृढ क्रान्तिकारी थिए । तर, उनलाई चन्दन सिंह र सौन्डर्सको हत्याको आरोपमा पक्रेर दिल्ली जेलमा हालियो र त्यहाँबाट केन्द्रीय जेलमा स्तान्तरण गरियो । तब उनले जेलको अनुचित कामको विरोधमा आवाज उठाए र त्यसको सुधारको लागि भोक हड्ताल नै गरे । उनको कपडा, खाना, कोठा सबै अशुद्ध थियो र उनलाई जेलमा धेरै नै शररीक श्रम गराइन्थ्यो । यो उनी र जेलका केही अन्य कैदीहरुलाई असैय भएकै कारण १९२९ मा भोक हड्तालको रुप लिएको थियो । उनलाई सार्वजनिक सहानुभूति र समर्थन धेरै मिलेको थियो । जवाहरलाल नेहरुले उनलाई जेलमा भेटेका थिए र उनले एउटा देशभक्तले जेलमा सास्ती खप्न परेकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । सरकारले उनीहरुको धैर्यताको परीक्षणका लागि उनीहरुलाई राम्रा स्थानमा राख्ने प्रस्ताव गरे पनि अनसनकर्ता कसैले पनि खाना खाएनन् । लाहोर षडयन्त्रपछि उनलाई लाहोरको बोरस्टल जेलमा लगियो, तर त्यहाँ पनि उनले भोक हड्ताल कायमै राखे । त्यतिबेलासम्म उनको १४ पाउन्ड तौल घटिसकेको थियो । उनको लोकप्रियताले पन्जाबको हद पार गरिसकेको थियो । उनले ११६ दिन पछि ५ अक्टोबर १९२९ मा आफ्नो भोक हड्ताल तोडेका थिए ।
मेरीम अल्टून ‘डेथ फास्ट’
१९७६ मा टर्कीमा जन्मेकी मेरीम अल्टून सानैदेखि कारावासलाई निकै नै रमाइलो तरिकाले बुझ्थिन् । उनले जेलका कैदीहरुको हक अधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि शान्तिपूर्ण अन्दोलनको रुपमा भोक हड्ताल गरिन् । उनको विरोध टर्कीका सबै सुरक्षा जेल प्रणालीविरुद्ध थियो । उक्त भोक हड्ताल ३०२ दिन लामो थियो । पिपुल्स क्रान्तिकारी लिबरेशन पार्टी वा डीएचकेपीकी सक्रिय सदस्य रहेकी उनको भोक हड्तालकै क्रममा २००२ मा इस्तान्बुल अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
अहमद जेड सलिम जुहैर ‘ग्वांटानामो बे’
१९६५ मा साउदी अरबमा जन्मेका अहमद जेड सलिम जुहैरले २००५ मा भोक हड्ताल सुरु गरेका थिए । तर, उक्त भोक हड्तालको चर्चा भने २००८ मा मिडियाले समाचार बनाएपछि मात्रै भयो । उनको भोक हड्ताल अमेरिकी सरकारविरुद्ध थियो । उनलाई ग्वांटानामो बे निरोध शिविरमा बन्धक बनाएर राखिएको थियो । उक्त शिविरका जेलरहरुले उनी लगायतका उनका साथीहरुलाई जबरजस्ती खाना खुवाउने प्रयास गरेपनि सफल भएका थिए । हड्तालको क्रममा उनको १६ किलो तौल घटेको थियो । जबर्जस्ती नाकबाट खाना खुवाउने प्रयास गरेका कारणले उनलाई बान्ता र एलर्जी भएको थियो । उनको भोक हड्ताल २००५ देखि २००९ सम्म गरेर १४५० दिनसम्म चलेको थियो जसले सिंगो विश्वलाई नै अच्चमित बनाएको थियो ।
इरोम चान्नु शर्मिला ‘मलुम नरसंहार’
इरोम चान्नु शर्मिला भारतीय हुन् । उनी एक कट्टरपंथी समाजवादी र राजनीतिक कार्यकर्ता थिइन् । विश्व इतिहासमा उनको भोक हड्ताल सबैभन्दा लामो भोक हड्तालको रुपमा चिनिएको छ । उनले २ नोबेम्बर २००० मा सशस्त्र सेना अधिनिएम (एएफएसपीए) को विरोधमा आमरण अनसन सुरु गरेकी थिइन् । मलुम नरसंहारले २८ बर्षीया शर्मिलालाई विरोध प्रदशन गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको थियो । मलूम नरसंहारमा १० जना मानिसहरु बस स्टेशनमा बस कुर्दा मारिएका थिए । सशस्त्र सेना अधिनिएम (एएफएसपीए) को उन्मूलनको माग गरेर उनले भोक हड्ताल गरेकी थिइन् । भारतका ६ वटा राज्यमा मात्र सिमित १९५८ को अधिनियम (विना जमानत दिने र वारेन्ट विना पक्राउ गर्ने) बाट उन्मुक्तीको लागि हड्ताल गरेकी उनले ५०० हप्तासम्म केही पनि खाइनन् । उनले १६ बर्षपछि आफ्नो भोक हड्ताल तोडेकी थिइन् । उनले भोक हड्ताल तोड्नुको कारण भने उनी राजनीतिमा आएर आएर लड्ने चाहाना नै थियो । पछि चुनाव लडे पनि उनले जितिनन् ।
नेपाल र म्यान्मा प्रेस काउन्सिलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल, भारत र भुटानबीच मैत्रीपूर्ण बक्सिङ प्रतियोगिता हुने
नेपाल र श्रीलङ्काबीच सिधा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्नु पर्छ : राजदूत परेरा
क्यानडा र अमेरिकासँग चीनको तनाव बढाउने मेङ वान्जूको रहस्यमय जीवन
भूमि समस्या निराकरणका लागि योजनाबद्ध काम हुँदै : मन्त्री अर्याल
२७ मंसिर, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिसम्बन्धी सबै समस्या निराकरण गर्न योजनाबद्ध काममा लागेको बताईन् । आज महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडामा आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अहिले भूमिबारे नीति निर्माण र कानूनसम्बन्धी काम भइरहेको बताईन । महोत्तरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा एवम् धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाका
शहीदको सपना पूरा गराउन लागिपरेका छौँ : अध्यक्ष दाहाल
२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली जनक्रान्तिका शहीदको सपना पूरा गराउन आफ्नो पार्टी प्रयासरत रहेको बताएका छन् । थारू भाषाको पत्रिका ‘मुक्तिक डगर’(मुक्तिको बाटो) को आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विमोचन गर्दै उनले शहीद, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाको सपना पूरा गराउन आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नसक्ने बताएका हुन् । नेपालको समग्र परिवर्तनका लागि शहीदले बगाएको रगत
ब्रेक्जिट सम्झौता बचाउन बेलायती प्रधानमन्त्रीको दौडधुप
२७ मंसिर, ब्रसेल्स । बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतृत्वविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव बिफल भएसँगै ब्रेक्जिट सम्झौता र आफ्नो करिअर जोगाउन सङ्घर्षरत बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे तीन दिनको बीचमा दोस्रो पटक ब्रसेल्स आइपुगेकी छिन् । युरोपेली युनियनको मुख्यालयमा हुने वार्तामा युरोपेली मध्यस्थकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री मेका पछिल्ला धारणाहरुका बारेमा विचारविमर्श गर्नेछन् । तर, यसअघि नै युरोपेली युनियनसँग भएको ५८५ पृष्ठको बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौतामा
भियतनाममा बाढीका कारण १३ जनाको मृत्यु
२७ मंसिर, हनोइ । भियतनाममा यसैसाता आएको भारी वर्षा र त्यसपछिको बाढीमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको मध्य भूभागमा आएको बाढीका कारण ठूलो भौतिक क्षति पुगेको भियतनामको प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण समितिले जानकारी दिएको छ । मध्य भियतनामका पाँच ओटा प्रान्तमा बाढीले १४ जना व्यक्तिलाई बगाएर लगेको र तीमध्ये १३ जनाको शव भेटिएको तथा एकजना अझै बेपत्ता रहेको समितिले जनाएको छ । सो बाढीले करिब १२ हजार
पपुआ विद्रोहीबाट आत्मसमर्पणको प्रस्ताव अस्वीकार
२६ मंसिर, जकार्ता । इन्डोनेसियाली सेनाले आत्मसमर्पण गर्न गरेको आग्रहलाई पृथकतावादी पपुआ विद्रोही समूहले बुधबार अस्वीकार गरेको छ । पपुआ विद्रोहीले गत साता निर्माण कार्यमा संलग्न कम्तीमा १६ जना कामदारको नृशंस हत्या गरेका थिए । कामदारको हत्यापछि सेनाले गरेको कारबाहीमा निर्दोष गाउँले मारिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पपुआ विद्रोही समूह र सेनाबीच पछिल्लो एक दशकदेखि सङ्घर्ष जारी छ । यद्यपी दुबै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर